Dawladda Soomaaliya oo ka hadashay sababta ay ula safatay Sucuudiga khilaafka udhexeeya Sucuudiga iyo Canada. • Oodweynenews.com Oodweyne News Somali News | Oodweynenews.com Oodweyne News Somali News
Dawladda Soomaaliya oo ka hadashay sababta ay ula safatay Sucuudiga khilaafka udhexeeya Sucuudiga iyo Canada.
Muqdisho-(OWN)-Wasiirka Wasaarrada arrimaha dibedda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa markii ugu horeysay ka hadlay go’aanka dowladda Soomaaliya ay ku garab istaagtay dowladda Sacuudiga oo khilaaf dhinaca Diblomaasiyada ah uu soo kala dhax-galay dalka Canada.
Isaga oo la hadlay Laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da ayuu sheegay in dowladda Soomaaliya xaq u leedahay in ay ka hadasho mowqifkeeda siyaasiga ah ee ku aadan waxa ka dhaca dunida inteeda kale oo aysan iska fiirsan doonin oo kaliya.
“Dhab weeye waanu ku taageernay dowladda Sacuudiga in aan la fara-gelin arrimahooda gudaha, si taa la mid ah ayeey-nu Canada u taageeri laheyn haddii la soo fara-galiyo siyaasadeeda gudaha ayuu yidhi Wasiir Cawad.
Waa markii ugu horeysay oo ay dowladda Soomaaliya dhinac la safato marka la eego siyaasadeeda arrimaha dibadda ee ka dhanka ah khilaafka soo kala dhex-gala dowladdaha, madaama horay go’aan dhax-dhaxaadnimo uga qaadatay khilaafkii soo kala dhax-galay wadamada Khaliijka oo is baheysi uu hogaaminayo Sacuudiga xidhiidhka ugu jireen dowladda Qatar.